” (၁၀)နှစ်တာကာလအတွင်း ပြောင်းလဲလှပလာတဲ့ သူ့အလှတွေကို ချပြလိုက်တဲ့ သန္တာလှိုင် “ – Askstyle
” (၁၀)နှစ်တာကာလအတွင်း ပြောင်းလဲလှပလာတဲ့ သူ့အလှတွေကို ချပြလိုက်တဲ့ သန္တာလှိုင် “
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စူပါမော်ဒယ်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ သန္တာလှိုင်က အခုချိန်အထိတိုင် မော်ဒယ်လောကတွင် ရပ်တည်နေတဲ့ စံပြမော်ဒယ်တစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ (၁၀)နှစ်တာကာလအတွင်း ပြောင်းလဲလှပလာတဲ့ သူ့အလှတွေကို “အချိန်ကလူကိုပြောင်းလဲစေပါတယ်တဲ့ အမှန်ပါပဲ…..ကျွန်မဒီနေ့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ကျန်းမာတဲ့ ရုပ်ရည်နဲ့ ခနာကိုယ်က ဟိုးအရင်ကထဲကနေ အမြဲပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး…. လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀နှစ်တုန်းက ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင် ဘာမှ မသိပဲ အစားဆိုရင် ပိန်ချင်တာနဲ့ ပုံမှန်မစား အစာတွေလျော့စား….. အိမ်ထောင်ရေးကလဲ အဆင်မပြေတော့ အိပ်ရေးတွေကလဲပျက်… အဲ့ဒါ လွန်ခဲ့ ၁၀ နှစ်ကျော်က ပုံလေးတွေ့လို့ အခုပုံတွေနဲ့အတူ ယှဉ်ပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်….
ကျန်းမာရေးဆိုတာ စပြီးလုပ်ဖို့ နောက်ကျသွားပြီဆိုတာ မရှိပါဘူး…. .. ကျွန်မ ဖြတ်သန်းခဲ့ရသလိုမျိုး မိန်းမသားတွေအကုန်လုံးကို မဖြတ်သန်းစေချင်ဘူး…” လို့သူရဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။သန္တာလှိုင်တစ်ယောက်ကတော့ ပရိသတ်တွေကြား ပွဲဆူပြီးဂယက်ထနေတဲ့ The Model Academy Season3ပြိုင်ပွဲမှာ ဒိုင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပါဝင်ပြီး ပြိုင်ပွဲဝင်တွေအတွက် နည်းလမ်းကောင်းတွေကိုချပြလေ့ရှိသူပဲဖြစ်ပါတယ်။
စူပါမော်ဒယ်သန္တာလှိုင်ကတော့ မိန်းကလေးပရိသတ်တွေ အားကျရတဲ့ အမိုက်စားBody ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေ သန္တာလှိုင်တစ်ယောက်ကတော့ နှစ်တွေအလီလီပြောင်းနေပေမယ့် သူ့ရဲ့အလှကတော့ပိုပိုလှလာတယ်နော်။
Source: Thandar Hlaing
” (၁၀)ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေျပာင္းလဲလွပလာတဲ့ သူ႔အလွေတြကို ခ်ျပလိုက္တဲ့ သႏၲာလႈိင္ ”
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စူပါေမာ္ဒယ္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ သႏၲာလႈိင္က အခုခ်ိန္အထိတိုင္ ေမာ္ဒယ္ေလာကတြင္ ရပ္တည္ေနတဲ့ စံျပေမာ္ဒယ္တစ္ဦးပဲျဖစ္ပါတယ္။သူကေတာ့ (၁၀)ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေျပာင္းလဲလွပလာတဲ့ သူ႔အလွေတြကို “အခ်ိန္ကလူကိုေျပာင္းလဲေစပါတယ္တဲ့ အမွန္ပါပဲ…..ကြၽန္မဒီေန႔ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ က်န္းမာတဲ့ ႐ုပ္ရည္နဲ႔ ခနာကိုယ္က ဟိုးအရင္ကထဲကေန အၿမဲပိုင္ဆိုင္ခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး…. လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ႏွစ္တုန္းက က်န္းမာေရးနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ဘာမွ မသိပဲ အစားဆိုရင္ ပိန္ခ်င္တာနဲ႔ ပုံမွန္မစား အစာေတြေလ်ာ့စား….. အိမ္ေထာင္ေရးကလဲ အဆင္မေျပေတာ့ အိပ္ေရးေတြကလဲပ်က္… အဲ့ဒါ လြန္ခဲ့ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္က ပုံေလးေတြ႕လို႔ အခုပုံေတြနဲ႔အတူ ယွဥ္ၿပီးတင္ေပးလိုက္ပါတယ္….
က်န္းမာေရးဆိုတာ စၿပီးလုပ္ဖို႔ ေနာက္က်သြားၿပီဆိုတာ မရွိပါဘူး…. .. ကြၽန္မ ျဖတ္သန္းခဲ့ရသလိုမ်ိဳး မိန္းမသားေတြအကုန္လုံးကို မျဖတ္သန္းေစခ်င္ဘူး…” လို႔သူရဲ႕ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။သႏၲာလိႈင္တစ္ေယာက္ကေတာ့ ပရိသတ္ေတြၾကား ပြဲဆူၿပီးဂယက္ထေနတဲ့ The Model Academy Season3ၿပိဳင္ပြဲမွာ ဒိုင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႕ ပါ၀င္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေတြအတြက္ နည္းလမ္းေကာင္းေတြကိုခ်ျပေလ့ရွိသူပဲျဖစ္ပါတယ္။
စူပါေမာ္ဒယ္သႏၲာလိႈင္ကေတာ့ မိန္းကေလးပရိသတ္ေတြ အားက်ရတဲ့ အမိုက္စားBody ကိုပိုင္ဆိုင္ထားပါတယ္။CeleGabar ပရိသတ္ႀကီးေရ သႏၲာလိႈင္တစ္ေယာက္ကေတာ့ ႏွစ္ေတြအလီလီေျပာင္းေနေပမယ့္ သူ႔ရဲ႕အလွကေတာ့ပိုပိုလွလာတယ္ေနာ္။